ကင်မရာ ၉လုံးနဲ့ထွက်ရှိလာမယ့် Light စမတ်ဖုန်းသစ် – DigitalTimes
ကင်မရာ ၉လုံးနဲ့ထွက်ရှိလာမယ့် Light စမတ်ဖုန်းသစ်
Light L16 ဆိုတဲ့ကင်မရာကိုမှတ်မိကြသေးရဲ့လား?? ၂၀၁၅ တုန်းက Google မှာတောင်ခေါက်ရှာရမလွယ်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Light ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီက Lens ၁၆ခုပါတဲ့ကင်မရာအမျိုးအစားသစ်တစ်ခုကို မိတ်ဆက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ (ခုနကပြောတဲ့ Light L16 ပါပဲ) သူကတော့ DSKR အရည်အသွေးရှိတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကို ဖန်တီးပေးနိုင်ပါတယ်။ အောက်မှာပုံလေးပြလိုက်ပါမယ်။
၂၀၁၅ ဆိုတဲ့ခုနှစ်မှာတော့ Lens ၁၆ခုနဲ့ကင်မရာဟာ တာ်တော်ကြီးထူးဆန်းနေခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် အခုနောက်ကင်မရာ၃လုံးပါတဲ့ Huawei P20 Pro တို့တွေလည်း ထွက်လာတော့ ကင်မရာများနေတာ ခုချိန်မှာ ဆန်းချင်မှဆန်းတော့မှာပါ။ P20 Pro မှာဆိုလည်း ပုံကောင်းတွေထွက်ဖို့ ကင်မရာ၃လုံးပေါင်းပြီးအလုပ်လုပ်ရသလို သူ့ရဲ့ကင်မရာ၁၆လုံးကလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပါပဲ။
အခု ဒီ Light ကုမ္ပဏီကနေပဲ ကင်မရာ ၅လံးုကနေ ၉လုံးထိ ပါလာနိုင်တဲ့စမတ်ဖုန်းတစ်လုံး ထွက်လာတော့မှာပါ။ သတင်းတွေအရဆို ဒီနှစ်အတွင်းမှာထွက်လာနိုင်ချေရှိပြီး 64MP ဓာတ်ပုံတွေကိုရိုက်ကူးနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ Light 16 တုန်းကတော့ ဒေါ်လာ ၂၀၀၀ နီးပါးရှိပြီး အခုထွက်မယ့်စမတ်ဖုန်းကတော့ ကင်မရာ ၅လံးုကနေ ၉လုံးကြားဆိုတော့ ဈေးပိုနည်းပါလိမ့်မယ်။ သင်ရောဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ? ကိုယ့်ရဲ့ DSLR ကင်မရာကို ကောင်းကောင်းအစားထိုးနိုင်တဲ့ဈေးကြီးလွန်းတဲ့ စမတ်ဖုန်းကို ဝယ်ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါသလား????